အနမ်းဝိညာဉ်: May 2012
အနမ်းဝိညာဉ် အိမ်လေးမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်.............
။ ဓါတ်ပုံ (3)
flash သီချင်းများ (3)
mp-3 သီချင်းများ.... (7)
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ်) စိန်စီသောည မှ အဆက်
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ်) စိန်စီသောည မှ အဆက် - Friday, 05 October 2012 12:48 Written by Yeyint Nge / သတင်း - ရေ...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အမျိူးသမီးတစ်ယောက်သည် ဘောလုံးမျက်လုံးဟုခေါ်ရမည့်အလားမျက်လုံး အိမ်ကျယ်ပုံကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါသည် ၄င်း၏ဦးခေါင်းခွံသ...
သိပ်လှတဲ့ ပုလိပ် မမ များ...
သိပ်လှတဲ့ ပုလိပ် မမ များ..တဲ့နော်ဟင်းးးးးးးးး ပြည်သူ့ ရဲထဲ ကျွန်တော်လည်းဝင်ချင်ပါတယ်... သူ့ ကိုမြင်မှပဲ ဒုစရိုက်မှုတွေပိုပြီးကျူးလွန်ချင်...
ပုံလေးတွေကို Funny Photo Maker နဲ့ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးပုံဖော်ရအောင်
ဒီ Software ထဲမှာ သူငယ်ချင်းတို့သဘောကျတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေအများကြီးပါတယ်နော် ပုံအစားထိုးတဲ့ပုံ ၊ ပြက္ခဒိန်လှလှလေးတွေ ၊ ဒီဇိုင်းလှတဲ့ Frame ...
မွေးဂဏန်း နှင့် သင့်အချစ်ဗေဒင်
(၁)ဂဏန်းသမားများ မည်သည့်လတွင်မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက် မွေးသူများကို ၁ ဂဏန်းသမားများဟု ခေါ်သည်။ ၁ ဂဏန်းပိုင်ရှင်များက အချစ် မေတ္တာဟူသည် နှလုံးသာ...
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက် ရိ...
မန္တလေးမြို့ ရှိ ဓာတ်အားလိုအပ်လျက်ရှိသော နေရာများကိ...
အမျိုးသမီးများသည် ယောက်ျားများထက် ဘုန်းကံနိမ့်သလော...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာသွားပြီဖြစ်...
***အွန်လိုင်းပေါ်က ရယ်စရာ အလွဲများ ***
မေလ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ပြည်မြို့ ကိုလည်း မီးစက်တွေရောက်ရှိလာ
8:55 pm | Labels: သတင်း
ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့ သို့ စပိန်နိုင်ငံက မှာယူတင်သွင်းထားတဲ့ မီးစက်တွေ ၂၄-၅-၂၀၁၂ နေ့ 
ပြည်မြို့ ရတနာမာန်အောင်ရပ်ကွက်ရှိ ပြည်မြို့အား ရေပေးဝေသည့် စခန်းနှင့် လျှပ်စစ်
မီးအတွက် လိုအပ်သောနေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မောင်းနှင်းဖြန့်ဖြူးရန်
အတွက် အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက ပေးပို့ လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ မြို့ တွေမှာ
ပြည်မြို့ တမြို့ ထဲသာ မေလ(၂၄)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံထိန်းရဲ
တွေက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်မြို. လမ်းမတော်လမ်း ဗဟိုမီးသတ်ရှေ့ မှာ ပြည်မြို. ၂၄နာရီ မီးရရှိရေးဆန္ဒပြ
နေသူတွေကို လုံထိမ်းရဲများက ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ကြရာမှာ ခေါင်းကွဲသူကွဲ ပြဲသူပြဲ ၊
နဲ့ ဖမ်းဆီးပြီး အဆင်သင့်စောင့်နေတဲ့ အချုပ်ကားပေါ်သို.တင်ဆောင်က ပြည်မြို့ 
အခုလို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ရာမှာ မြို.နယ်မှုးနှင့်တကွ စခန်းမှူးများကပါ
၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတဲ့
နေ့ မှာပဲ ပြည်မြို့ အတွက် မီးစက်တွေရောက်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar News Now
Posted by soulkiss Links to this post
မန္တလေးမြို့ ရှိ ဓာတ်အားလိုအပ်လျက်ရှိသော နေရာများကို ဓာတ်အားဖြန့့်ဖြူးနိုင်ရန် မီးစက်များရောက်ရှိလာ
8:35 pm | Labels: သတင်း
မန္တလေးမြို့ မှာ စပိန်နိုင်ငံက မှာယူတင်သွင်းထားတဲ့ မီးစက်တွေ ၂၄-၅-၂၀၁၂ နေ့ 
လည်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။
လောလောဆယ် ရောက်လာတဲ့ မီးစက်များကတော့ ၅၀၀ ကေဗွီအေ (၂)လုံး။
၃၀၀ ကေဗွီအေ (၆)လုံး၊ စုစုပေါင်း (၈)လုံးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မီးစက်တွေ
ထပ်ရောက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။
အခုရောက်ရှိလာတဲ့ မီးစက်တွေက mobile တွေဖြစ်လို့ဓာတ်အား အရေးပေါ်
လိုမယ့် နေရာတွေကို လိုက်လံဖြန့်ဖြူးပေးမယ်လို့ သိရတယ်။ အထူးသဖြင့်
ဆေးရုံတွေ၊ အများပြည်သူကို ရေဖြန့် ဖြူးပေးဝေမယ့် နေရာတွေကို
အဓိကထားပြီး ဓာတ်အားပေးစက်များ ချထားမယ်လိုသိ ရပါတယ်။
ဒါအပြင့် အရေးပေါ် ဓာတ်အားလိုအပ်မယ်နေရာများကို လိုက်လံ မောင်းနှင်ဓာတ်အား
ဖြန့် ဖြူးပေးဖို့ ရှိကြောင်းလည်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
Myanamar News Now
အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ မီးစက်တွေကို မန္တလေးမြို့ မှာ လိုက်လံနေရာချထားပုံများ
12:26 am | Labels: သတင်း
ယနေ့မနက်ပိုင်းတွင် ယမန်နေ့ညများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပါဝင်ပါတ်သက်ခဲ့သူ အချို့အား သက်ဆိုင်ရာမှ ခေါ်ယူမေးမြန်း စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၂ခုမေလ၂၀ရက် ၂၁ရက် မန္တလေးမြို့ပြည်သူများ၏ မီးထွန်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်၍ ယနေ့၂၂ရက်မနက်အစောပိုင်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး NLD မှ ဦးဇော်ဝင်းအောင်၊ဦးလှမိုး၊ဦးချစ်တင်၊ဒေါ်ခင်သန်းညွှန့်(မန်းတိုင်း NLD ဘဏ္ဍငွေရှာဖွေရေးအဖွဲဝင်)တို့ကို သက်ဆိုင်ရာက ၀ရမ်းမပါဘဲ မန္တလေးတောင်ခြေအနီးရှိ SBရုံးသို့ ခေါ်ယူမေးမြန်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ထိုသူတို့၏ နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေ မသိရှိရသေးပါ။
အာရှအလင်းရောင်ဖောင်ဒေးရှင်း(ပြင်ဦးလွင်)၏ လက်ခွဲ အာရှအလင်းရောင်ဖောင်ဒေးရှင်း(မန္တလေး)တာဝန်ခံ၊ မန္တလေးတိုင်း NLD ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် အား ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းက SB (သို့) ရဲများက ဖမ်းဝရမ်းမပါဘဲ ခေါ်ဆောင်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးမှ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ အယ်ဒီတာ ဥက္ကာကျော် (ကလေး ၄ ယောက်၏ ဖခင်)လည်း ၄င်းနေထိုင်ရာ မြို့သစ်နေအိမ်မှ ယနေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့်က SB (သို့) ထောက်လှမ်းရေး (သို့) ရဲများ၏ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။ ယခုအထိ ၄င်းနှင့် အဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေ (၂၀/၂၁) ရက်များတွင် မန္တလေး၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒပြု ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးယခုအခါ မန္တလေးမြို့ပေါ်၌ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အဖမ်းခံ (သို့မဟုတ်) ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခံနေရရာ ယခုအထိ နောက်ဆုံးကြားသိရသော သတင်းအရ လူဦးရေ အယောက် ငါးဆယ် ကျော်သွားပြီဟု CJMyanmar က သတင်းရရှိပါသည်။
ယနေ့ (၂၂.၅.၂၀၁၂) ည ၇ နာရီတွင်လည်း မန္တလေးမြို့၌ လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒပြု ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းလှုပ်ရှားမှု တတိယမြောက်ရက်အဖြစ် ဆက်လက်ဆင်နွှဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော အလားတူ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သော အလင်းရောင်အဖွဲ့၏ လက်ကမ်းစာများအရ သိရှိခဲ့ရရာ ယနေ့အင်္ဂါနေ့ညတွင် တတိယရက်မြောက် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းဆန္ဒပြုပွဲ မန္တလေးတွင် လုပ်ဖြစ်မဖြစ် စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံတစ်ဦးက CJMyanmar သို့ ပြောကြားလိုက်သည်။
True News ဂျာနယ်၏ မန္တလေးသတင်းထောက်၊ စိမ်းရောင်စိုလှုမှုကူညီရေးအဖွဲ့နှင့် အခြားသော လှုမှုရေးရာအဖွဲ့များတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုမင်းထက်ငြိမ်းချမ်းလည်း SB/ရဲများ၏ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံလိုက်ရကြောင်း CJMyanmar က သတင်းရရှိသည်။
9:34 pm | Labels: နည်းပညာ
Open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။မိမိ ကွန်ပျူတာကရှိတဲ့ပုံကို ကြိုက်တာယူလို့ရပါတယ်။
ကဲမိမိပုံပေါ်လာပြီးဆိုရင်း Get Code ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Code ပေါ်လာပြီးဆိုရင်း ကော်ပီယူပြီး မိမိအိမ်မှာထည့်လို့ရပါပြီး။HTML ကိုနှိပ်ပြီးမှထည့်ပါနော်။
အမျိုးသမီးများသည် ယောက်ျားများထက် ဘုန်းကံနိမ့်သလော
8:44 pm | Labels: ဘာသာရေး
ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် နောင်နောင်ပါ၊ အမေရိကားမှာနေပါသည်ဘုရား အနောက်တိုင်းသား ဗုဒ္ဒဘာသာကိုယုံကြည့်သောသူများနှင့် ဘာသာရေးအကြောင်းပြောရင်
မြန်မာပြည်မှ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေမှာ မိန်းကလေးတွေမ၀င်ရ ဥပမာ ကျိုက်ထီးရိုးတို့လို ဆံတော်ရှင် စေတီတော်တော်များများမှာ မိန်းကလေးတွေမ၀င်ရဘူးဆိုပြီး ပြောကြပါသည်ဘုရား အဲဒါနဲ့စပ်ပြိး သူတို့နဲ့စကားပြောဖြစ်တော့ မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့မ၀င်ရတာလဲလို့ မေးတော့ တပည့်တော်များလဲ လွယ်လွယ်ပဲဖြေလိုက် ပါတယ်ဘုရား။
မိန်းကလေးတွေက ယောင်္ကျားတွေလောက် မမြတ်လို့ပဲ ဖြေလိုက်တော့ အနောက်တိုင်းသားတွေက အဲဒါကိုလက်မခံပါဘူးဘုရား။ သူတို့က ယောက်ျားမိန်းမ ဆိုတာအတူတူပဲ မိန်းကလေးတွေကတောင် ဒီနိုင်ငံမှာ အခွင့်ရေးပိုပြီးပေးထားတော့ သူတို့က မိန်းမက သာတောင်သာသလိုပြောပါသည်ဆိုတော့ တပည့်တော်သိလိုသည်မှာ ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက် ဘုန်းကံကြီးတယ် မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုတိုင်းတာရမလဲဘုရား။
ယောက်ျားတွေက ဘာလို့မိန်းမတွေထက် ဘုန်းကံကြီးတယ် မြင့်မြတ်တယ်လို့ ယူဆပါသလဲ အကြောင်းပြချက်ထုတ်ပြတော်မူပါဘုရား။ မြန်မာနိုင်ငံကဘုရားတွေမှာ မိန်းကလေးတွေ မ၀င်ရဆိုတဲ့နေရာမှာ မ၀င်ရ မတက်ရဆိုတဲ့နေရာမှာ ၀င်ရင် တက်ရင် တကယ်ပဲ မိုးကြိုးပစ်ပါသလားဘုရား။ အဲဒါဘာ့ကြောင့်ပါလဲ မိန်းကလေးတွေကို ဘာလို့ယုတ်ညံ့တယ်လို့ ယူဆကြပါသလဲဘုရား ဥပမာများနှင့်တကွ ကျေနပ်လောက်ပါသောအဖြေကို ဖြေပေးတော်မူပါဘုရား။
ဆရာတော်ရဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာကို ရိုသေစွာ ရှိခိုးပါသည်ဘုရား။
နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ အမျိုးသမီးများ မတက်ရ မ၀င် မဖြတ်ရဆိုတဲ့ ဘုရားတွေ ဘုရားရင်ပြင်တွေ သိမ်တွေမှ ဆိုင်းဘုတ်တွေ တွေ့နေရသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအများစုမှာ ယောင်ဝါးဝါးတွေ ဖြစ်သွားရတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေကို လုံးဝဆုပ်ကိုင်ထားသူများသာ ဒီအယူဆတွေကို လက်မခံပေမဲ့ ယောင်ဝါးဝါးတွေကတော့ လက်ခံနေကြတယ်။
နံပါတ် (၂) ကတော့ အမျိုးသမီးများသည် ယောက်ျားများထက် ဘုန်းကံနိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ ၂ ခုကိုပဲ ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်။
နံပါတ် (၁) ဘုရား ကျောင်း သိမ်စတဲ့ နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးများ မတက်ရ မ၀င်ရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာရေးသူ၏ အမြင်ကိုပဲ ပြောပြရမှာဖြစ်ပါသည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအယူအဆတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘုရားဟောမဟုတ်၍ ထေရ၀ါဒလမ်းစဉ်မဟုတ်သော အယူအဆတွေဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘာလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီအယူအဆတွေ ရှိနေပါသလဲလို့ မေးရင် tradition ရိုးရာအစဉ်အလာ လက်ခံမှုလို့ပဲ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အဆက်လက်ခံလာကြသည့် အယူအဆဖြစ်သည်။ တချို့နေရာတွေမှာ ဘုရား သို့မဟုတ် ကျောင်း သိမ်များ၏ အဦးဆုံး ဒါယကာများကပဲ သူတို့၏ ဘုရား ကျောင်း သိမ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ မတက်ရဟု သတ်မှတ်ခဲ့သလား၊ ဒါမှ မဟုတ် ဂေါပကများ၏ ဘုရားကို သို့မဟုတ် ဘုရားရှင်၏ ကျောင်းတော်များကို ကြည်ညိုလွန်း၍ ဒီစည်းကမ်းသက်မှတ်ခဲ့လေရော့လား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများက ကျောင်းထဲတွင် အမြတ်ဆုံး သိမ်တို့ကို အလွန်အလေးထားကြသည်၊ ဘုရားရှင်၏သားတော်များ မွေးဖွားပေးရာ ကျောင်းဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။
မြန်မာပြည် တချို့ နာမည်ကြီး ဘုရားရင်ပြင်တို့၌ အမျိုးသမီးများ မတက်ရ မ၀င်ရဟု ပြောနေကြပေမဲ့ ဘုရားလက်ထက်တော်က သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်၏ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းဆောင်ထဲအတွင်း ၀ိသာခါ ခေမာ စတဲ့ အမျိုးသမီးများ ၀င်ထွက် သွားလာနေသည်တို့ကို ထောက်ဆလျှင် ထိုရိုးရာအစဉ်အလာလက်ခံမှုသည် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်။ သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်၏ ကျောင်းအတွင်းတောင် အမျိုးသမီးများ ၀င်ထွက် သွားလာခွင့်ပြုရသေးတာပဲ ဘုရားရှင်အားရည်စူးပြီးကိုးကွယ်ထားတဲ့ ထိုစေတီ ပုထိုး ကျောင်းများကိုက ဘာလို့ အမျိုးသမီးများဝင်ခွင့် မပြုရမှာလဲ။ ၀င်ရင် တက်ရင် မိုးကြိုးပြစ်သည်တဲ့၊ တကယ် ၀င် တကယ်တက်ကြည့်တော့ မိုးကြိုးမပြစ်ရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ၊ တချို့နေရာတွေမှာ နာမည်ကြီးအောင် လူအထင်ကြီးအောင် ထွင်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှုပ်ထွေးကုန်တယ်။
တချို့နယ်တွေမှာ သိမ်ထဲကို အမျိုးသမီးများ မ၀င်ရဟု ဆိုကြတယ်၊ လူတွေကလဲ အမျိုးသမီးများကို သိမ်ထဲမ၀င်ရဟု ထင်နေကြသည်၊ ၀င်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ်ပေါ့၊ စာရေးသူ ရဟန်းခံစဉ်က အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်းက သိမ်ကြီးထဲမှာ ရဟန်းပြုခံပါတယ်၊ ယခုလက်ရှိ နာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလာဘိဝံသကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုပြီး ရဟန်းပြုခဲ့တာပါ၊ ထိုရဟန်းခံစဉ်က သိမ်ထဲထွင် ဒကာရော ဒကာမရော ကလေးရော များစွာရှိနေပါတယ်၊ စာရေးသူကို ခေတ်ပညာများ သင်ပေးရာ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဇောတိကာမဟာသိမ်တော်ကြီးအတွင်းမှာလဲ အမျိုးသမီးများ ၀င်ခွင့်ပြုသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ထိုသိမ်တော်ကြီးအတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာ ထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်များ အစည်းအဝေးကြီးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်က အမျိုးသား အမျိုးသမီးများစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဘုရားလက်ထက်က ရာဇဂြိုဟ်မြို့ကြီးသည် လူဦး ၁၈ ကုဋေရှိသည်။ ငယ်ငယ်က ထို ရာဇဂဟ ပုဒ်ကို တောင် ၅ လုံးက ပတ်ပတ်လည် ကားရံထားလို့ တောင်ငါးလုံးရန် နွားခြံတို့လို ရာဇဂြိဟ်မြို့သို့ဟု နိဿျဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုမျှလောက် လူဦးရေ ထူထပ်သော ရာဇဂြိုဟ်မြို့ကြီး တစ်မြို့လုံးကို သိမ်သမုတ်ထားသည်။ ထိုမြို့ကြီးသည်ပင် သိမ်မည်ပါသည်။ ထိုသိမ်ကြီးထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ အိပ်ကြသည်၊ နေကြသည်၊ ကျင့်ကြီးကျင်ငယ်အမှု ပြုကြသည်၊ ဇနီးခင်ပွန်းတို့ပြုကြသည့်အမှုတွေ ပြုကြသည်။ ထိုဘုရားလက်ထက်ကတောင် အမျိုးသမီးများ သိမ်ထဲမှ နေခွင့်ပြုသေးတယ်ဆိုရင် ဒီခေတ်မှာ သိမ်ထဲ အမျိုးသမီးများမ၀င်ရဟုသော တားမြစ်ချက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော ဆက်ဆံမှုသာဖြစ်သည်။ သိမ်ထဲ ၀င်ခြင်းကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်ပါဟု ယူဆပါသည်။ သိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘုရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးဖြစ်စေ အမျိုးသားဖြစ်စေ ရဟန်းပဲဖြစ်စေ အကုသိုလ်စိတ်နှင့် ၀င်ရင် သွားရင်တော့ အပြစ်ရှိသလို ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သွားရင်တော့ ကုသိုလ်တွေ ရမှာအမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
တချို့က ဘုရားကျောင်းသိမ်တွေမှာ အမျိုးသမီးများ မ၀င်ရခြင်းသည် အမျိုးသမီးများက ဘုန်းကံ မရှိသောကြောင့်ဟု ယူဆထားကြသည်။ တကယ်တော့ ထိုအယူအဆ မမှန်ကန်ဟုဆိုရပါမည်။ အမျိုးသမီးရဟန်းမများ ထွန်းကားသည့်အချိန်အခါက အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် သိမ်ထဲဝင်ပြီး ရဟန်းပြုကြသည်၊ ကံကြီးကံငယ်ပြုကြသည်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရဟန်းများပြုလုပ်နိုင်သည့် ကံကြီးကံငယ်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်မှာ ရဟန်း မဟုတ်သော အမျိုးသားများထက် ဘုန်းကံရှိနေသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်ဘုန်းကံအကြောင်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြမည်။
အမျိုးသမီးများသည် ယောက်ျားများထက် ဘုန်းကံနိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် သူများအတင်းပြောသလို ဖြစ်နေမယ်၊ တကယ်တော့ အမျိုးသားလဲ လူသား အမျိုးသမီးလဲ လူသားဆိုတော့ လူဖြစ်ဖို့ရန် ဘုန်းကံအတူပါလာတာခြင်း အတူတူပဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုန်းကံအနဲအများအပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကွဲပြားပေမဲ့ သာသနာအတွက်ရော လူမှုရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအတွက်တွေပါ အကျိုးပြုပေးနိုင်တာကတော့ တန်းတူ လုပ်နိုင်ကြသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ အကောင်း (positive view) အမြင်ကိုသာ ရေးချင်ပေမဲ့ မေးလာတဲ့သူရှိလာတော့ မေးခွန်းအရ ဘုန်းကံနိမ့်ခြင်းအကြောင်းကို စာပေမှာ ပြဆိုထားတဲ့ စကားအချို့နဲ့ တင်ပြရပါလိမ့်မည်။
အဘိဓမ္မာ ၇ ကျမ်းတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ (အဋ္ဌသာလိနီ) စာမျက်နှာ ၃၅၈-၃၅၉ တို့၌ ဣတ္ထိလိင်္ဂံ ဣတ္ထိနိမိတ္တံအဖွင့်မှာ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက် ဖွဲ့စည်းပုံ အသွင်အပြင် မတူပုံနှင့် ထိုအသွင်အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏အကြောင်းများကို ပြဆိုထားသည်။ သရက်မျိုးစေ့ဗီဇကြောင့် သရက်ပင်အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြစ်လာရသလို အမျိုးသမီးပုံသဏ္ဌာန် ဖြစ်လာရခြင်းကလည်း ထိုအသွင်သဏ္ဌာန်ကို ဖြစ်စေ ပဋိသန္ဓေမျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကို စာက ကမ္မဇ (ကံကြောင့်) ဟု ခေါ်သည်။ အမျိုးသားများကိုလည်း ထိုနည်းအတူမှတ်လေ။
တခါက သောရေယျအမျိုးသား အလွန်ချောမောလှပသော အရှင်မဟာကစ္စာယန ရဟန္တာမထေရ်ကို မြင်ပြီး အယောနိသောမနသိကာရ (မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး) ဖြစ်မိသည်၊ ဒီလောက်လှတဲ့သူ ငါ့မိန်းမဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဟု အတွေးစိတ်ဝင်လာတဲ့အမျှ ထိုသောရေယျ သူဋ္ဌေးသား သူ၏အမျိုးသားအင်္ဂါများပျောက်ကွယ်သွားပြီး အမျိုးသမီးအင်္ဂါပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်၊ (ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ သောရေယျဝတ္ထု)။ တခါက ရဟန်းမတစ်ယောက်သည်လည်း အမျိုးသမီးအင်္ဂါများ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အမျိုးအင်္ဂါများပေါ်ပေါက်လာသည်၊ ဘုရားရှင်အားလျှောက်ထားသောအခေါ ဘုရားရှင်က ရဟန်းတော်များ နေသောကျောင်းသို့ ရွှေ့ထားပေးခဲ့ရဖူးသည်။ (ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်-၄၃)။
ထိုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးလိင် (ဣတ္ထိလိင်္ဂ)နှင့် အမျိုးသားလိင် (ပုရိသလိင်္ဂ)နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဓမ္မသင်္ဂဏီအဋ္ဌကထာက ဤကဲ့သို့ဆိုထားသည်၊ ‘‘အမျိုးသား လိင် သည် မြတ်၏ (ဥတ္တမ)၊ အမျိုးသမီးလိင်သည် ညံ့၏ (ဟီန)ဟု ဆိုထားသည်။ သောရေယျသူဋ္ဌေးသားကဲ့သို့သော အမျိုးသား လိင်အင်္ဂါ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသည် အလွန်အားကောင်းသော အကုသိုလ် (ဗလ၀ အကုသလ) အစွမ်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါ ရရှိခြင်းသည်ကား အနဲငယ်သော ကုသိုလ် (ဒုဗ္ဗလ ကုသလ) အစွမ်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ တဖန် အထက်ပါ ဘိက္ခူနီမကဲ့သို့ အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသည် အနဲငယ်သော အကုသိုလ် (ဒုဗ္ဗလ အကုသလ) အစွမ်းကြောင့် ဖြစ်သည်၊ အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် အလွန်စွမ်းအားကြီးသော ကုသိုလ် (ဗလ၀ ကုသလ) ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြထာသည်။ အကျဉ်းချုပ်သော် ၂ မျိုးလုံး ကွယ်ပျောက်ခြင်းသည် အကုသိုလ် အနဲအများကြောင့် ဖြစ်သလို ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းကလဲ ကုသိုလ် အနဲအများကြောင့် ဖြစ်ရသည်။
ထိုအဋ္ဌကထာဆရာ၏အဆိုများအရ- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အကုသိုလ်ကြီးခဲ့သလို ကုသိုလ်ကံတွေ နဲခဲ့သော ကြောင့် အမျိုးသမီးဖြစ်ရသည်ဟုဆိုသည့်အတွက် ဘုန်းကံလဲ နဲသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ဘုန်းကံဆိုသည်မှာ ကုသိုလ်ကံကိုဆိုလိုပါသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံကိုက အမျိုးသားများကဲ့သို့ ပေါ့ပါးမှုမရှိ၊ လွတ်လပ်မှုမရှိသည့် အပြင် ယောက်ျားများထက် သီးခြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း၊ သားမွေးရခြင်း၊ ဥတုလာခြင်း စတဲ့ဒုက္ခများသည် ယောက်ျားများထက် ဘုန်းကံနဲပါးခြင်းဆိုတဲ့ လက္ခဏာများရှိနေသည့်အတွက် စာနာထောက်ထားသင့်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ခွင့်ရှိသည်၊ ဘုရားရှင်၏ လက်ျာ လက်ဝဲများဖြစ်ခွင့်ရှိသည်၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် အဆင့်တူ ပညာအရာဝယ် ခေမာထေရီ၊ အရှင်မောဂ္ဂလာန်နှင့်အဆင့်တူ တန်ခိုးအရာဝယ် ဥပ္ပလ၀ဏ်ထေရီနှင့် တခြား ဓမ္မကထိကအရာ ဓမ္မဒိန္နာထေရီနှင့် ၀ိနည်းဆောင်အရာမှာ ပဋာစာရီစသော အမျိုးသမီးရဟန်းမများကဲ့သို့ အမျိုးသားများနည်းတူ ရာထူးများ ရရှိကြသည်။ မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ဝင်ရာမှာလဲ အမျိုးသားများကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများလဲ ၀င်ရောက်နိုင်သည် ဖြစ်ရာကား သာသနာမှာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးအဆင့်တူဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက် ဂရုဓမ် ၈ ပါးကား အမျိုးသားများကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ မတူရာကား အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်က လွဲ၍ အားလုံး ခံစားခွင့်တူသည်ဟု ဆိုရမည်။ သာသနာတော်မှာ အခွင့်တူခံစားမှု ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဖြစ်ခွင့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ခွင့်မရှိသော အရာများကား ရှိသေးသည်။
ဘုရား၊ ဗြဟ္မာ၊ စကြာဝတေးမင်း၊ မာနတ်မင်း၊ သကြားမင်းဟုသော ထိုနေရာများမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ခွင့်မရှိ။ ‘‘ဘုရား ဗြဟ္မာ မင်းစကြ်ာနှင့် မာရ သက္ကံ မိန်းမမှန် အမှန် မဖြစ်ရာ’’ ဟု ငယ်ငယ် သာမဏေကျော်တန်း ၀င်စဉ်က ရဖူးသည် ကဗျာဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် ပထမအုပ်)။
အဋ္ဌသာလိနီတွင် ဘုရားဖြစ်ဖို့ရန် ပြည့်စုံရမည့်အချက်ထဲမှာ လိင်္ဂသမ္ပတ္တိ ဆိုတာပါသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါရှိရမည်ဟု ဆိုသည်။ ‘‘မနုဿတ္တံ လိင်္ဂသမ္ပတ္တိ၊ ဟေတု သတ္ထာရဒဿနံ’’။ ဗုဒ္ဓ၀ံသ-၂-၅၉ နှင့် အဋ္ဌသာလိနီ ဗုဒ္ဓ၀င်အခန်းမှာ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကုသိုလ် အကုသိုလ်တို့သည် လူတစ်ယောက်၏ ဘုန်းကံများဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ယောက်၏ ဘုန်းကံကြီးခြင်း ဘုန်းကံနဲခြင်းကို ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကံတို့၏ အနဲအများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဘုန်းကံကြီးသူသည် ကုသိုလ်ကံကြီးသူများဖြစ်ပြီး အကုသိုလ်ကံ နဲသူများဖြစ်သည်။ ဘုန်းကံနဲခြင်းဆိုသည်မှာ ကုသိုလ်ကံနဲပါးခြင်းနှင့် အကုသိုလ်ကံ များပြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဗလ၀ အကုသလ ၀သေန - များစွာသော အကုသိုလ်အစွမ်းကြောင့် အမျိုးသမီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အကုသိုလ်အဖြစ်များသလား? မေးစရာရှိလာသည်။
တခါက အနုရုဒ္ဓါမထေရ်ကြီး ဘုရားထံရောက်လာပြီး ‘‘အရှင်ဘုရား-တပည့်တော် နတ်မျက်စိနှင့် အမျိုးသမီးတွေ ငရဲကျရောက်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရပါသလဲဘုရား’’ မေးလျှောက်သော အခါ
ဘုရားရှင်က ‘‘အနုရုဒ္ဓါ အမျိုးသမီးတွေ ငရဲရောက်နေကြတယ်ဆိုတာ အချက်သုံးချက်နှင့် တစ်နေကုန် နေနေကြလို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၃ ချက်က---
၁။ နံက်ပိုင်းမှာ- အမျိုးသမီးတွေက မစ္ဆရိယစိတ်တွေနဲ့ နေကြတယ်။
၂။ နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့- ဣဿာ စိတ်နဲ့ နေကြတယ်။
၃။ ညနေပိုင်းမှာတော့- ရာဂစိတ်နဲ့ နေကြတယ်။
‘‘နံနက် မစ္ဆေ နေ့လည် ဣဿာ ညနေ ရာဂ’’ ဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်က ရထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တစ်ပိုင်းတစ်စလေး ဖြစ်ပါတယ်။
(အင်္ဂုတ္တိုရနိကာယ်၊ ပထမအနုရုဒ္ဓါသုတ်၊ နှာ ၂၈၅)။
ဤသုတ်တော်က အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အကုသိုလ်စိတ် အဖြစ်များတယ်၊ ဖြစ်ချိန် ပိုများတယ်ဆိုတာ ပြဆိုခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။ နံက် အိပ်ယာထ မိုးလင်းတာနဲ့ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာ မစ္ဆရိယစိတ် စဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်၊ နေ့လည်ပိုင်းရောက်လာတော့ သူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှု အောင်မြင်မှု ပြည့်စုံမှုအပေါ်မှာ ဣဿာစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုဆိုသည်၊ ထို ဣဿာအကြောင်းကို စာရေးသူ၏ဆိုက်တွင် လောကအဖျက်တရား အပိုင်း(၁)တွင် အကျယ်တ၀န့်ပြဆိုထားပြီး မစ္ဆရိယအကြောင်းကိုတော့ လောကအဖျက်တရား အပိုင်း (၂) တွင် ဖော်ပြီးဖြစ်ရကား ထိုပို့စ်များကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ညပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး ရာဂစိတ်ပိုဖြစ်တယ်ဟု ဆိုသည်။
စာရေးသူ၏အယူအဆ မဟုတ်ပါ၊ ဘုရားဟောများကိုသာ ထုတ်ဖော်ပြခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေကြသူများကလဲ အမျိုးသမီးများပင်ဖြစ်သည်၊ စာရေးသူ၏ပညာရေးကို ထောက်ပံ့သူများကားလဲ အမျိုးသမီးက ခက်များများပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နတ်ပြည်မှာ နတ်သားတစ်ယောက် နတ်သမီး ၅၀၀ ဆိုတော့ နတ်ပြည်အရောက်များသူတွေကလဲ အမျိုးသမီးများပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသုတ်အဆိုအရ ထိုအင်္ဂါ၃ ရပ်ဖြင့် အဖြစ်များသူများကို ရည်ရွယ်သည်၊ အမျိုးသမီးအားလုံးကို မဆိုလို၊ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကို ဆိုလိုသည်၊ ငရဲကျရောက်နေသော အမျိုးသမီးများကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။ ငရဲကျရောက်တတ်တယ်ဟုဆိုသည်။ တော်ကြာ အမျိုးသမီးထုက ဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီး စာရေးသူ ပါးစပ်ပေါက် ပိတ်သွားနိုင်သည်။
နတ်ပြည်ရောက်သူ အရေအတွက်ကြည့်ပြန်တော့ အမျိုးသမီးများက ကောင်းရာဘုံကို အဖြစ်များသလိုဖြစ်သည်အတွက် ကောင်းမှုပြုသူများသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးဘ၀ကနေ တိုက်ရိုက်အနေနဲ့ ဘုရားအဖြစ် သကြားမင်း လူမင်း နတ်မင်း ဗြဟ္မာ အဖြစ်ကိုတော့ မရနိုင် အမျိုးသားဘ၀ရောက်အောင် ကောင်းမှုပြု အမျိုးသားဘ၀ဖြစ်ချင်သည့်ဆန္ဒဖြင့် ဆန္ဒပြုကြရသည်။ ထိုအမျိုးသားဘ၀ ရရှိပြီးမှသာ ဘုရား သကြားစတဲ့ ဘ၀မျိုးများကို ရနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ မယ်တော်သည်ပင် သန္တုသိတ နတ်သား ဖြစ်ခဲ့သည်ကို သတိပြုသင့်ပေသည်။ အရှင်အာနန္ဒာသည် မိန်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘ၀တွေ များစွာရှိခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်နှင့် အရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ သာဝကကြီးများသည်လည်း လူသားထက် ဘုန်းကံနိမ့်သည့် တိရစ္ဆာန်ဘ၀တို့ဖြင့် များစွာကျင်ခဲ့ရသည်တို့ကို ထောက်ဆ၍ ဘုရားဖြစ်ဖို့ သာဝကကြီးများဖြစ်ဖို့ ဘ၀အမျိုးမျိုး ဘုန်းကံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် သံသရာကို ဖြတ်သန်းပြီးမှ ဘုရားအဖြစ်၊ သာဝကကြီးများအဖြစ်ကြရသည်ကို ထောက်ဆလျင် အမျိုးသမီးများလဲ ပစ္စုပ္ပန် လက်ရှိဘ၀မှာ ဘုရားအဖြစ်ကို မရနိုင်ပေမဲ့ ဘုရားလောင်းနှင့် သာဝကလောင်းကြီးများနည်းတူ ပါရမီများ ဖြည့်ပြီး ဘုရားအဖြစ် သာဝက (အမျိုးသား)ကြီးများအဖြစ်ကို ရနိုင်ပါသည်။ ဤကား အမျိုးသမီးများ မဖြစ်နိုင်သည့်အရာများကို ရနိုင်သည့် အခွင့်လမ်းဖြစ်သည်။
ဖေ့ဘုတ်မှာတင်ထားတဲ့ ချစ်စရာအမျိုးသမီးငယ်လေးများ၏ ဘုန်းကံ
ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသည်သာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်သာ အမျိုးသားများထက် နိမ့်နေသည်ဆိုစေကာမူ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အသိပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကား အဆင့်တူဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သာသနာမှာ အမျိုးသားများကဲ့သို့ ရာထူးများရသည်၊ မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာများမှာ အမျိုးသမီးများ နေရာယူလာသည်၊ တိုင်းပြည်၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာကြသည့်အတွက် ပြည်သူများ အလေးပေးဆက်ဆံရမည့် သူများဖြစ်လာကြသည့်အတွက် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် နှလုံးရည်များ တန်းတူ ရှိလာနိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဤသို့အားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဘုန်းကံနိမ့်သည်ဟု အထင်အမြင်ဖြင့် အမျိုးသမီးများကို အထင်မသေးသင့်။
ဒကာတော် နောင်နောင်ရေ--မောင်ရင်ရဲ့ အမေးကို ဘုန်းဘုန်းတတ်နိုင်သလောက် ဤမျှလောက်ဖြင့်စုစည်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ကျေနပ်မှုမရှိသေးပါက ရှေ့ဆက်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါသည်။
8:38 pm | Labels: မှတ်သားစရာ
Knowledge တစ်ခုခုရသွားတယ်ဆိုရင် ဆုဂျေကျေနပ်ပါပြီနော်..။ဒီထဲကဟာတွေတစ်ခုမှ...မကြောက်တတ်ဘူး
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးများ ပြောကြား
8:17 pm | Labels: သတင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သော တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ လီမြောင်ဘတ်နှင့်အတူ မေလ ၁၄ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်၌ တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-နိင်ငံတော် သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်)
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေးများက မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
''သမ္မတကြီး ကျန်းမာသွားပါပြီ။ အပရိကပါ။ ပင်ပန်းသွားလို့ ဖြစ်တာပါ''ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေးက မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အခြား နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေးတစ်ဦးကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဘာမှ မဖြစ်ကြောင်း နှင့် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့လာသည့်အခါတွင် ခရီးပန်းသွား၍ ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရက်အနည်းငယ် နေထိုင်ပြီးနောက် နေပြည်တော်သို့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြန်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ၄င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နှလုံးခုန်ထိန်းညှိစက် ထည့်ထားရသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မူးလဲသွားပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေသည်ဆိုသည့် သတင်းများမေလ ၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်း ပြည်သူများကြားတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ စိုးရိမ်ပူပန်စွာဖြင့် မေးမြန်းလာသည့်အပေါ် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၄င်း၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ကောလာဟလများသာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခရီးသွားနေသည်မှာ မှန်ပါကြောင်း၊ ယင်းအချက်မှလွဲ၍ ကျန်သည့်သတင်းများ လုံးဝမဟုတ်ပါကြောင်း၊ ပူပန်မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်း တုံ့ပြန် ရေးသားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Facebook စာမျက်နှာများတွင် သုံးစွဲသူများက ''အထူးဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့ ပြောပါရစေ..မြန်မာပြည်က အခုမှ အသက်ရှုရတာ သက်သာသလိုရှိပါ သေးတယ်..သမ္မတကြီး သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေ..''၊ ''သမ္မတကြီး ကျန်းကျန်းမာမာရှိပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပါတယ်''၊ ''ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအကျိုး ဆထက်တပိုး ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းများနှင့်အတူ........''အစရှိ သဖြင့် ရေးသားထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးမှာ တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေအပေါ် သက်ရောက်မှုများစွာရှိနိုင်၍ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်သတင်းများကို သက်ဆိုင်ရာမှ တရားဝင်ထုတ် ပြန်လေ့ မရှိပေ။
10:51 pm | Labels: ဟာသ
. (၁) အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းပေးပါ ?
(၄) ရတာမလို ... လိုတာမရ ... အို ... လူ့ဘ၀
(၅) မြန်မာ အိုင်ပေါ့ နှင့် နိုင်ငံခြား အိုင်ပေါ့
(၇) တိန်...ထမင်းတော့မချက်ဘူး G talk မှာချက်မယ်
(၈) တိုင်ပတ်နေသော်ငနဲ့ပတ်တနာပဲ..ချောချီက မက်ဆေ့လာနေတာ
(၉) ၀ူး ...သားကောင်ကြီးကြီး ဘယ်နေရာမှာ ရှိသလဲရှာလိုက်အုံးမှ ...၀ူးထွားဟားဟား
------------------------------------------------------------------------> (၁၀) ခန္တီပါရမီကို စမ်းသပ်ခြင်း... :D
(၁၁) တစ်ကမ္ဘာလုံး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ အဲဒီနိုင်ငံ၊ နှစ်နိုင်ငံပဲ အေးချမ်းတယ်...တစ်ကယ့် အေးရာအေးကြောင်းပါပဲ.
--------------------------------------------------------------------------> (၁၂) ထုံးစံအတိုင်း.. :D
(၁၃) တာဇံ စစ်စစ်ပါတဲ့ သစ်တောမရှိလို့...တာဇံစစ်ရင် မှတ်ပုံတင်ပြခိုင်းလိုက်
(၁၄) မီးနဲ့ ရေ ဘာကိုရွေးမလဲ
(၁၅) ငါးထောင်တန် ဖုန်းမရခင် ဒါသုံးထားနော် လိုင်းကြည်တယ်
(၁၆) ( Saxy ) လုံးဝ စက်ဆီပဲ (အမဲဆီမဟုတ်ဘူး)
(၁၉) ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်စေနဲ့
(၂၀) ကွန်နစ်ရှင် မကောင်းရင် တားတား ဒီလိုသုံးတယ် ...
Copyright 2011 အနမ်းဝိညာဉ်.All rights reserved. Powered by Blogger
Luggage, Vacation Ideas, San Diego Beaches, SharePoint 2010.